Madaxweyne Farmaajo oo siweyn loogu soo dhaweeyey Masar – WARSOOR
Madaxweyne Farmaajo oo siweyn loogu soo dhaweeyey Masar
Muqdisho – (warsoor) – Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaliya mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa maanta oo Axad ah gaaray dalka Masar, waxaana garoonka diyaaraha ee magaalada Qaahira ku soo dhaweeyay dhigiisa dalkaas Abdel Fattah El Sisi.
Labada madaxweyne ayaa la filayaa in saacadaha soo socoda kulan yeeshaan isla markaana ka wada hadlaan xoojinta xiriirka labada dowladood, gobolka iyo guud ahaan danaha ay wadaagaan ee Afrika
Booqashadii ugu horeysay madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo uu ku tago dalka Masar tan iyo markii madaxweynaha jamhuuriyadda loo doortay 8 Fibraayo ee sanadkan.
Madaxweynaha ayaa wefdigiisa waxaa kamid ah wasiirka arimaha dibadda iyo xubno kale oo ay kamid yihiin saraakiil ka tirsan madaxtooyada qaranka.
Wefdiga madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa la kulmi doona jaaliyadda Soomaaliyeed ee kunool dalka Masar, oo uga warbixin doona guulaha ay ku talaabsatay Dowladda Soomaaliya iyo horumarka dalka ku soo kordhay.
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare”Waxaan bilaabi doonaa Barnaamijyo Bulshada aan ugu ifineyno shuruucda dalka”